Uncedo ngemveliso-TIGERNU LEATHER Co., Ltd.
Inayiloni, i-Oxford Cloth Bag Ukucoca
Hlamba emanzini angaphantsi kweedigri ezingama-30. Emva kokuntywila ngamanzi kunye nesepha yansuku zonke, unokuxubha ngobunono ngebrashi ethambileyo. Musa ukuveza umphezulu wengubo ephantsi kwelanga. Yiphefumle ngaphakathi nangaphandle emva kokuhlamba.
Ukucoca ibhegi yelinva
Iingxowa zelaphu kufuneka zicoceke kangangoko kunokwenzeka (hlamba ngokulula, ungasebenzisi iisepha ezinee-bleach okanye iiarhente zefluorescent). Ukuba kufuneka uzihlambe ngamanzi, uzifake emanzini abandayo, kwaye ungazivezi phantsi kwelanga, kuyacetyiswa ukuba zibenomthunzi kwaye zomile. Xa uhlamba okokuqala, unokongeza ityuwa encinci etyiwayo okanye iviniga emhlophe emanzini acocekileyo, emva koko uyigalele emanzini kangangemizuzu engama-30 ukunqanda ukubuna.
Sebenzisa ilaphu elithambileyo elicocekileyo ukuntywila intlama encinci okanye into yokucoca ibhegi apho kufuneka icocwe khona. Emva koko unokuntywila amanzi kancinci kwaye usule ngobunono. Okokugqibela, ungasebenzisa elinye ilaphu elicocekileyo elicocekileyo ukunyanga umphezulu. Unokusebenzisa ukukhanya okukhanyayo kwesikhumba ebhegini. Ukuba awunayo, ungasebenzisa ukhilimu wesandla omncinci, kodwa awunakho ukusebenzisa kakhulu. Ingxowa iya kukhanya njengtsha. Ungaze uthambise ulusu emanzini kwaye ucoce. Ukuba ulusu ludala, ungafaka isicelo sokuthambisa esingenambabala esinekhrimu yolondolozo lwesikhumba kwindawo egugileyo. Emva kokungena kancinci, inokuconjululwa ngelaphu elicocekileyo nelithambileyo, elinokuphinda lenze isikhumba sikhazimle kwakhona kwaye kuthintele ulusu ukuba lome.
Izinto eziluncedo Primary uKhuphiswano:
I-TIGERNU iqulunqe ulwahlulo olwahlukileyo lobusela obuchasene nobusela
Inombolo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza: ZL2013 2 0083407.6
Uyilo loyilo lwesakhiwo, fihla iziphu kunye nepokotho.
Izicelo ze-Ergonomics kwimitya yamagxa kunye nenxalenye yangasemva, ikhusela ngokupheleleyo umqolo.
Izixhobo ezisebenzayo, zanele onke amanqaku akho emihla ngemihla.
Ingubo yendalo esingqongileyo, Yithi kakuhle kwi-allergies yesikhumba.
Umgangatho owomeleleyo, uhamba kunye nawe ixesha elide.
Eyona Brand iBrand ethandwayo eRussia, eMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Korea.
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza:
Uziphu kabini maleko Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza.: ZL2013 2 0083407.6
Indawo evulwe ngokupheleleyo:ZL 2016 2 0256788.7
ULaptop eyandisiweyo igumbi: ZL 201320005715.7